जिल्ला – Page4– Deshko News
Home » जिल्ला (page 4)
खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु
मोरङ, २ बैशाख । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका – २ मा आईतबार दिउँसो घर नजिकै रहेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अदुवासिंह गनगाईको ६ वर्षका छोरा आवेदसिंह गनगाईको घर नजिकै खेल्ने क्रममा पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको हो । दिउँसो करिब २ बजेतिर घरबाट खेल्न निस्केका बालकलाई स्थानीयबासीले खाल्डोमा डुबेको देखेपछि बाहिर निकालेर उपचारका लागि प्राथमिक ...
गौरादहमा कृषि क्याम्पस स्थापना
झापा,२ वैशाख । झापाको गौरादहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रुपमा कृषि क्याम्पस स्थापना भएको छ । गौरादह बहुमुखी क्याम्पस रहेको स्थानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. केशवराज अधिकारीले आईतबार एक कार्यक्रमका बिच उदुघाटन गर्नु भएको छ । उद्घाटन गर्दै डा. अधिकारीले यस वर्ष ५० जना विद्यार्थीहरुले गौरादह कृषि क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने र ४ ...
धिमाल समुदायको जात्री पर्व आजबाट सुरु
मोरङ, २ वैशाख । प्रदेश १ मा बसोबास गर्ने धिमाल समुदायको मौलिक पर्व जात्री पर्व आजबाट सुरु भएको छ । वैशाख २ गतेदेखि असार २ गतेसम्म धिमाल समुदायले जात्री पर्व मनाउँछन् । नयाँ वर्षको आगमनसँगै शुरु हुने गर्दछ । नेपालका आदिवासी धिमाल जातिको उद्यमस्थल मानिएको मोरङको भोगटेनीस्थित राजारानीमा मेला लगाएर जात्री पर्व सुरु हुन्छ । ग्रामथानमा हाँस कुखुरा, सुँगुरलगायतको बलि ...
नेपालबाट यसरी गरिन्छ गाई–गोरुको तस्करी, ५० गोरु नियन्त्रणमा
बाहिरी मुलुक लैजानका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका–४ कम्दी खालेमशाह गाउँबाट ५० वटा गोरु प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार खालेमसाह
इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा बिष्फोट
इलाम, २ बैशाख । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाको भवनमा शनिवार राती अज्ञात समूहले बम विष्फोट गराएको छ । विष्फोटबाट गाउँपालिकाको सभा हल र कार्यपालिकाको बैठक कक्ष पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । शनिवार राति ९ बजे कार्यालयमा ठूलो आवाजमा बम विष्फोट भएको थियो । विष्फोटबाट दुईतले भवनका छत भ्वाङ परेको र छानासमेत खसेको कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत छवि खतिवडाले बताउनुभयो । घटनास्थलमा हेर्दा कुकरका ...
मोरङ, २ बैशाख । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–५ स्थित सुनबर्षी मन्दिरको पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर शनिवार साँझ एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सुनबर्षी नगरपालिका–२ बस्ने ५५ बर्षिय मग्ना मिँया रहेका छन् । उनलाई उक्त पोखरीमा डुबेर मृत अवस्थामा भेटेपछी स्थानियबासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । बैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा सो मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ ।
झापा, १ वैशाख । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड सडकखण्डमा शनिवार साँझ यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बिर्तामोड नगरपालिका–१ निवासी ३५ वर्षीय प्रेम राई रहेका छन् । नौ वर्षीय छोरा करणलाई साइकलमा पछाडि राखेर दक्षिणबाट आउँदै गरेका उनलाई सडक पार गर्ने क्रममा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको मे१ख १३७१ नंको बसले ठक्कर दिएको थियो । बसको ठक्करबाट ...
तराईमा सिरुवा पर्व सुरु
विराटनगर, १ वैशाख । तराईको धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वका रुपमा रहेको सिरुवा पर्व शनिवारदेखि विधिवत शुरु भएको छ । नववर्षको आगमनका साथ कृषिमा आधारित यो पर्व दुई दिनसम्म मनाउने गरिन्छ । नयाँ वर्षको आगमनसँगै नयाँ बाली पनि भित्र्याउन गरिएको खुशीयालीमा ‘वैशाखी’ पर्व मनाउने गरिएको हो । आज पहिलो दिन सतुवाइन पर्वका रुपमा मनाउने गरिन्छ । पर्वका अवसरमा आज घरका देवीदेवतालाई ...
आगलागीमा रु पाँच लाख क्षति
राजविराज, १ वैशाख । सप्तरीमा छुट्टाछुट्टै ठाउँमा शुक्रवार राति आगलागी हुँदा रु पाँच लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । राजविराज नगरपालिका – ९, जोलहरी पश्चिम टोल बस्ने बालगोविन्द यादवको गाईगोठमा आगलागी हुँदा परालका दुई कुन्यु , १० कट्ठा खेतबाट काटेर राखिएको गहुँ, दुई क्विन्टल तोरी र एक थान पम्पिङसेट जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीबाट करीब रु दुई ...
बैशाख १ गते मात्रै फूल्ने फूल हेर्न हजारौंको भीड
प्रत्येक नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख १ गते मात्र फुल्ने फूल सलहेशको दर्शन गर्न आज बिहानैदेखि सिरहा जिल्लाको लहान नगरपालिकास्थित ऐतिहासिक स्थल सलहेश फूलबारी पर्यटकीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको